Omenala igba ohia Brass factory na suppliers | Ouzhan
Brass na-abụghị ferrous metal anwụ-mgbatị-omenala nkenke ọla anwụ anwụ-ife akụkụ
Na nkedo ọla, manganese bras, aluminom brass, silicon brass, brass bra, wdg ka etolitere site na itinye ihe ndị ọzọ alloying. A na-akpọ ọla kọpa ọla kọpa na-enweghị zinc dị ka ihe bụ isi na ọla kọpa, dị ka ọla nchara, ọla kọpa, ọla nchara, na beryllium bronze. Na ọkọlọtọ mba, enwere ụdị ọla kọpa ọla kọpa 9, gụnyere akara 29. Nkedo ọla kọpa alloy bụ ụdị nke mgbatị alloy ihe ọtụtụ-eji na ụlọ ọrụ. A na-ejikarị alloys ndị na-eji ọla kọpa eme ihe na ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri na ụlọ ọrụ ndị na-emepụta ọgwụ n'ihi ezigbo nguzogide nkwụsị nke mmiri dị mma, mmiri mmiri na ụfọdụ ihe ngwọta mmiri. N'ihi ezigbo nrụpụta ọkụ ya na ijigide nguzogide, a na-ejikarị alloys ndị na-eji ọla kọpa eme ihe na imepụta ihe na-agba ọsọ maka igwe dị iche iche na-ebu ibu dị arọ na nnukwu ọsọ na-agbanwegharị.
Uru nke ọla nke na-abụghị nke ọla na-anwụ anwụ:
OEM ahaziri ọla na-abụghị ferrous metal anwụ na-n servicefe service-China Shanghai brass non-ferrous metal anwụ-mgbatị akụkụ emeputa
Ouzhan bụ onye nrụpụta na - agbakwunye ụlọ ọrụ na azụmaahịa, na - enye ọrụ ndozi ntụgharị na igwe nhazi igwe. Dị ka ndị ahịa chọrọ, elu-nkenke ọla anwụ-mgbatị na mụ na a pụrụ ịdabere na àgwà nwere ike esichara. A na-arụpụta akụkụ igwe ndị a site na iji akụrụngwa kachasị mma, nke a na-enweta site na ndị na-ebubata ngwa ahịa a ma ama. Anyị ike na ọkachamara oru otu na oru oma management na ime ihe na usoro nwere ike hụ na zuru okè n'ichepụta ọla na-anwụ-mgbatị n'ibu akụkụ. Tụkwasị na nke ahụ, ngwaahịa ndị na-anwụ anwụ na-enye iwu na-agbaso ụkpụrụ dị elu ma nwee ike iji ya rụọ ọrụ dị iche iche. Na anyị nwere ike inye mpi ọrụ maka ọla na-anwụ-mgbatị akụkụ ka anyị kpọrọ ihe ahịa.
Gịnị bụ ojiji nke ọla na-anwụ-mgbatị akụkụ
Uru nke Ouzhan Brass Die Casting Service
- All nkenke ọla na-anwụ-mgbatị ngwaahịa na-n'okpuru nlezianya àgwà nnyocha.
- Dị ka Eserese ma ọ bụ n'omume Nlụpụta nkenke ọla na-anwụ-mgbatị akụkụ.
Nke gara aga: OEM igwe anaghị agba nchara mbịne akụkụ customization
Osote: Omenala ọla anwụ n castfe akụkụ